शिलाजित : के यसले यौन क्षमता बढाउँछ ? - Supa Online
२०७८ आश्विन १०, आईतवार १५:०५
शिलाजित के हो ?
शिलाजित पत्थरबाट उत्पन्न भएको खनिज पदार्थ हो । घाम लागेर भएको प्रचण्ड गर्मीका कारण पहाडको धातुको भाग पग्लिएर पहाडबाट बाहिर निस्किएको पदार्थ नै शिलाजित हो ।
शिलाजितको उपभोगले क्यान्सर कोषसँग लड्न पनि मद्दत गर्छ । एक अनुसन्धानले पत्ता लगाए अनुसार शिलाजितले कलेजोको क्यान्सरमा कमी ल्याउन महत्वपूणर् भूमिका खेलेको हुन्छ ।
एथ्नोग्राफी जर्नलमा प्रकाशित २०१२ को एक अध्ययन अनुसार शिलाजितको प्रयोगले थकान जस्ता मानसिक कमजोरीको अवस्था कम गर्न महत्वपूणर् भूमिका खेल्छ भन्ने पुष्टि भएको थियो ।